Izwe laseMelika lishiya isivumelwano seG20 Paris | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izwe laseMelika lishiya isivumelwano se-G20 Paris
Izolo ngoMgqibelo umhla ka-8, i-G20 ikuqinisekisile lokho Izwe laseMelika lisishiya phansi iSivumelwano SaseParis. Ekugcineni, umongameli wayo, uDonald Trump, uthathe isinqumo sokuguqula isivumelwano sokunciphisa ukukhishwa kwe-CO2 nokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Umgomo wayo wokuzihlukanisa uwuchaze kanjalo. Ukuvikela lapho uTrump egcine khona izwi lakhe. IKhansela laseJalimane, U-Angela Merkel uthe, "Lapho kungavunyelwana khona, kumele kuvezwe ukungavumelani." Ngakho-ke, usuku lweshumi nambili lwe-G20 luvalwe izolo ngemuva kwenkinga yezezimali, ngalezi zindaba ezimbili ezimakiwe.
U-Angela Merkel wayecacile "Angazi ngokufihla lapho kungekho kuvumelana khona, kodwa kusho ukukusho kahle." Ikhansela laphinde lasebenzisa leli thuba lenza kwacaca ukuthi alwa nezokuvikela. Ngokusobala, le ngqungquthela igcine ngokuthi i-USA izibophezele ekuzinikeleni kwayo ekwenzeni izinqubomgomo ezithanda izwe elihlanzeke kakhulu. Ngokusho kukaDonald Trump, isizathu esikhulu wukulimala akwenzayo emnothweni wezwe lakhe.
Ngabe zithinta kanjani izivumelwano ezintsha ezifinyelelwe yi-G20?
Ngaphandle kokungavumelani kwelungu elilodwa lamalungu, amanye ayi-1 aqhubeka nezibophezelo ababevumelene ngazo, kudvwetshwa lo uhlobo "olungalungiseki" lwezivumelwano. Kuyaphawuleka ukuthi umhlangano obubanjelwe edolobheni laseJalimane iHamburg, ubuphila ngokwanele.
I-China, ngokwengxenye yayo, izibophezele ekufezeni iphuzu ngalinye lolo hlelo. Yize kungamandla okugcina okujoyina iSivumelwano saseParis, bekuvuna, kanye namanye ama-18, ukuqhubeka nezinqubomgomo eziphikisana nokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokuhwebelana kwamazwe omhlaba okukhululekile.
Kumele kungezwe lokho i-G20 bekufanele yehlise i-ajenda yayo yenkululeko ukugwema ikhefu ne-United States. Ngandlela thile, inqubomgomo yokuvikela ethe xaxa yengeze emibhikishweni yomphakathi, iphoqeleke ukuthi ivume, "ukuthi izinzuzo zokuhwebelana kwamazwe aziboniswanga kuzo zonke izindawo."
Okubalulekile manje ukuthi iSivumelwano SaseParis sizoqhubeka nokuphikisana, Abangu-19 kwabangu-20 bazibophezele ekwehliseni amagesi e-carbon dioxide. Ekugcineni uDonald Trump, akakwazanga ukwephula isivumelwano ngasohlangothini lwabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Izwe laseMelika lishiya isivumelwano se-G20 Paris
Ngokuguquka kwesimo sezulu sizophoqeleka ukuthi sifuduke
Ama-degree ama-54 Celsius aqoshwe e-Iran